Diintu Dawo Ma Tahay? | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Diintu Dawo Ma Tahay?
Waxaa soo weydiima ahi waxa ay ka dhax guuxaysaa qalbiyada dad badan. Nasiib wanaag waxa dhooban goob walba dhiganayaal amma kutub warcelin waafi ah innaga siinaysa weydiimahaa. Culimada Islaamku Carab iyo Cajamba waxay kaga warceliyeen weydiin walba maqaallo kumanaan dhaafaya iyo kutub boqollaal kor maray. Waa badoo ka bixi maynee, bal aan in yar ka war bixinno, kuna koobnaanno labada weydiimood e hore (diintu dawo ma tahay? Iyo xanuunadee ayaa lagu daweeyaa?). Inta aynaan cid kale wax weydiin, warbixinna ka doonin, bal aan eegno Alle sarreeya waxa uu ka yidhi weydiimahaa.
Isra, 82:17 (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)
“ Waxa Qur’aanka aan soo dajinay xaggiisa ka ahaaday daawayn iyo naxariis dadka mu’miniinta ah.” Yuunis, 57: (قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ) 8
“ Waxa idiin timid waano iyo daawin waxa qalbiyada ku jira taasoo ka timid xagga Rabbigiina.” Fusilat, 44:4 (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ) 1
“ Ku dheh ku wii Alle rumeeyey Qur’aanku waxa uu idiin yahay hanuun iyo dawo.” Aayadahan iyo qaar kale oo aynaan soo qaadan oo dhammaantood isku macno dhadhaw waxa ay inna tusinayaan in Qur’aank dawo yahay.
Innag oon fogaanba waxa halkaa waxa innooga soo baxay jawaabta Qur’aanku dawo ma yahay amma haddii aan si kale u dhigno Diintu dawo ma tahay.
(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَيْئًا شفاء)
“Culimadu wey isku khilaafeen daaweynta Qur’aanka, laba hadal ayaana ku jira
Hadalka hore: Quraanku waxa uu dawo u ayahay qalbiyada isaga oo ka nadiifinaya mugdiga ( jaahlinimada) meeshana ka saaraya shakiga. Waxa uu qalbiga ka faydaa aqoon darrida isaga oo tusinaya mucjisooyinka iyo arrimaha caddaynaya Alle.
Hadalka labaad: Qur’aanku waxa uu daweeyee cudurrada ku dhaca jidhka isaga oo adeegsanaya Alle bari iyo in Alle la magan galo.”
“Waxa ay koobsanaysaa daawada cudurada ku dhaca qalbiga sida faydidda munaafaqnimada iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa ay daawo u tahay jidh ka haddii la Qur’aan saaro.”
“Abii Saciid Alkhudri Alle raali ha ka ahaadee wuxu yidhi waxa u baxay safar koox ka tirsan asxaabtii Nebiga NNKH illaa ay soo degeen xaafad ka mid ah xaafadihii Carabta. Marti gelin ayey weydiistten laakiin wey diideen in ay marti geliyaan. Kadib, odaygii xaafadda ayey abeeso qaniintay. Wax walba oo ay ku daweyn karayeen wey sameeyeen, laakiin kumay guulaysan. Badhka ka mid ah ayaa yidhi, haddii aad u tagtaan kooxdaa halkaa soo degtay ( waa asxaabtiiye) waxa laga yaabaa badhkood ka soo heshaan wax dawo noqda. Wey u tageen. Waxay ku yidheen ragoow, odaygii xaafadda ayaa la qaniinay. Wax walba waan samaynay, laakiin waxb u may tarin. Midkiin ma hayaa wax dawo noqda? Badh ka mid ah asxaabtii ayaa yidhi, Alle ayaan ku dhaarannee waan haynaa. Laakiin Alle ayaan ku dhaarannee marti gelin ayaan idin weydiisannay oo waad diideen in aad na marti gelisaan. Idiin Qur’aan saari mayno illaayood noo samaysaan mushqaayad mooyaane. Wey wanaajiyeen oo waxay u sheegeen in ay siin doonaan goosan adhi ah. Wuu tegay ( waa asxaabigiiye) wuxu ku tufay kuna akhriyey Faatixada. Waxaabad moodda in dabar laga furay ( waa odaygii abeesadu qaniintay ee Qur’aanka lagu akhriyaye). Asxaabigii wuu iska tegay isaga oo wax qalbiga ku haya. Dadkii xaafadda ee odayga Qur’aanka loogu akhriyey ayaa yidhi, u oofiya mushqaayaddii aad kula heshiiseen. Wey siiyeen. Asxaabtii badh ka mid ah ayaa yidhi inno qaybiya adhiga. Asxaabigii odayga soo Qur’aan saaray ayaa yidhi, ha samaynina ( ha qaybinina) illaa yoon Nebigii NNKH ula tagno oo aan uga warranno aan aragno waxa uu inna amro. Nebiga NNKH ayey u tageen. Wey uga warrameen. Wuxu ku yidhi, maxaad ka taqaanaan, waa ruqiya e! Ka dibna waxu uu ku yidhi, waad garateen ama waad la hesheen. Qaybiya oo anigana igu, dara intuu Nebigu NNKH yara qolay. ”
Sidoo kale waxa jira axaadiis kutub dhowr ah ku timid daraja ahaanna xasan ah oo iyana sheegaysa qaniinyada hangarallaha/daba qalooca/geel kaga cabaadista in Nebigu NNKH ku daweeyey suuradaha Qulhuwallaha, قُلْ هُوَ اللَّهُ iyo mucawadateenka ( Qulacuudu birabbinaas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس, Qulacuudu birabbil falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ). Dhinac kale haddii aan eegno waxa jira axaadiis kale oo isku macno dhow oo odhanaysa Qur’aanku dawo uma aha illaa isha iyo xumadda mooyaane. Kan aan tusaale u soo qaadanno.
”. لا رقية إلا من عين أو حمة” عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (2057) الترمذي(3884) رواه و أبو داود
Sheekhan oo ay la qabaan culima kale oo badani, haddii aan si guud hadalkiisa u soo koobno waxay noqonaysaa in aanay ruqiyadu ku koobnayn isha iyo xumadda, laakiin isha iyo xumadddu ay tahay ta ugu haboob ee lagu daweyn karo.